> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Faylal ay ka BlackBerry Geesi
Dhibaato: Ladnaansho video iyo sawiro ka BlackBerry Geesi
Waxaan si qalad ah tirtiray oo dhan photos aan ku Blackberry aan Geesi 9900 la howlgal qaldan. Fadlan caawi !! Ma suroobi karaa waddo si ay u soo ceshano? Caawimaad kasta oo la jeclaan lahaa!
Dhab ahaantii, waxaa jira fursad ay ku soo kabsadaan photos tirtiray iyo videos taleefanada Geesi Blackberry, laakiin sidoo kale waxaa jira xaalad xaddidaad aad u: telefoonka waa in aan loo isticmaalin in lagu soo qabto sawiro iyo filimo cusub, iyo sidoo kale in uu kaydiyo faylasha kale oo cusub oo ku saabsan kaadhka xusuusta. Waa maxay sababta? Files tirtiray la overwritten karo by files cusub. Marka tahay ay overwritten, waa wax aan macquul aheyn si ay u soo kabsadaan mar labaad. Haddii aad joojiyeen isticmaalka telefoonka ka dib markii uu shilka, hambalyo! Akhri xal ah.
Xalka: Ladnaansho photos & videos ka BlackBerry Geesi
Ka hor inta aanay is bilaabay, diyaarisaa sawir Geesi kabashada qalab BlackBerry: Wondershare Photo Recovery , ama Wondershare Photo Recovery for Mac (la heli karo Mavericks).
Labada barnaamijyada waa la isku halayn karo oo xirfadle ah. Iyada oo taageero ka barnaamijkan, waxaad awoodi doontaa inaad dib u soo ceshano oo dhan videos iyo sawiro ka BlackBerry Geesi, arrinta ma waxaad iyaga sababta loo waayey la tirtiro, formatting ama sababo kale. Waxa ay taageertaa dib u soo kabashada ee BlackBerry Geesi 9000, 9700, 9900, 9930, iwm 9. Waxaad soo kaban karto, files in 3 talaabooyin fudud si dhab ah.
Isku day version maxkamad free of this BlackBerry kabashada software sawir Geesi hadda. Dooro version saxda ah ee computer.
Tallaabada 1. Launch barnaamijka sawir Geesi BlackBerry
Marka bilaabay barnaamijka, waxaad u baahan tahay in ay ku xidhmaan telefoonka in kombiyuutarka la cable ah digital, oo hubi in uu la ogaado. Markaas riix "Start" button in interface ugu muhiimsan si ay u bilaabaan soo kabashada sawir Geesi BlackBerry.
Tallaabada 2. Dooro in iskaan dhammaan faylasha tirtiray aad BlackBerry Geesi.
Tallaabada 3. Check oo soo kabsado tirtiray sawirada & videos ka BlackBerry Geesi ka mid ah.
Fiiro gaar ah: Ha mar badbaadin xogta soo kabsaday ku qoran kaarka Geesi ama xasuusta BlackBerry. Raadi meel kale, waayo, sida on your computer ama disk kale dibadda, Ammaanka awgiis.
Video tutorial ah Blackberry kabashada sawir Geesi